"Finfinneefi GAONF seenaan, aadaan, duudhaafi uumaan tokko" PMNO Obbo Shimallis Abdiisaa - ETHIOPIANS TODAY
“Finfinneefi GAONF seenaan, aadaan, duudhaafi uumaan tokko” PMNO Obbo Shimallis Abdiisaa
“Finfinneefi GAONF seenaan, aadaan, duudhaafi uumaan tokko” PMNO Obbo Shimallis Abdiisaa.
Finfinneefi godinni kun bu’aa siyaasaaf jecha hundeeffama Finfinneerraa hanga Boqonnaa jijjiiramaatti walirraa dhiibamaa ture, amma kun seenaa ta’ee darbeera, seenaa haaraatu jalqabamaa jira jedhan PMNO obbo Shimallis Abdiisaa
Finfinneefi GAONF kan alaa alatti wal dheessu osoo hintaane qaama waliiti, Finfinneen GAONF malee jiraachuus hin dandeessu jedhan, uumaa ganamaa bu’uuraa godhannee hojii jalqabne waliin taanee biyya hunda keenyaaf taatu ijaarra jedhan.
Kantiibaa itti aantuun Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanechi Abeebee Finfinneen baroota dheeraaf yaaddoo Uummata Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee turte, amma kun seenaa ta’eera jedhan.
Sagantaa nyaata barattootaa,uffannaa danbiifi dabtara barnootaa rabsuurratti haasawaa kan taasisan Aadde Adaanechi, uummata babal’ina Fifinneetiif aarsaa kaffale tumsuuf yeroon isaa amma kan barnootaan jalqabne tajaajila bishaaniifi daandiinis itti fufa jedhan.
Lafa dura namatu dursa, nama keessaayyuu dhaloota egereetu dursa jennee, dhaloota boriirratti hojii jalqabneerra kun boqonnaa waliin hojjachuu keenyaa isa jalqabaati jedhan Aadde Adaanechi.
Misooma Finfinnee kamirraayyuu hawaasni godinichaa akka fayyadamuuf waliin hojjanna jechuun dhamaniiru
Action was taken against more than 30,000 organizations in Addis Ababa that are said to be the cause of the high cost of living
We can’t afford for South Sudan to go back to war-IGAD boss